Aka na-achị mba South Korịa, bụ Chung Hong-won e werena aka ya rituo n’ọchịchị. Nke a na-eme n’ihi otu ndị mmadụ siri na-akakpọ gọọmenti ya maka usoro ha siri kpa agwa gbasara ndị obodo ha ahụ nwụrụ n’ihe mberede ụgbọ mmiri. Mgbe ọ na-agwa ndị mba ahụ okwu, Chung Hong-won kwuru n’akwa ya na-ebere ezi n’ụlọ niile ndị ịhe mberede a metụtara anarago ya ụra n’anya.
N’abalị iri n’isii nke ọnwa Eprelụ, ụgbọ mmiri ndị South Korịa bu mmadụ narị anọ n’iri asaa n’isii kpuru ekpu. Ndị ọrụ nchekwa gụtara otu narị mmadụ n’iri asatọ n’asaa ndị nwụrụ anwụ. Ọtụtụ n’ime ha bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi, ndị na-aga njem nlere anya. A ka na-achọ ọtụtụ ndị mmadụ achọ.